ရှာဖွေမှုအဆင့်များ မြှင့်တင်ရန် | Martech Zone
တူညီသောအိမ်တွင်းဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်သည့် ဒေသနှစ်ခုရှိ ဖောက်သည်နှစ်ဦးအတွက် ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ Client A သည် ၎င်းတို့၏ ဒေသတွင် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ခန့် အတွေ့အကြုံရှိသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Client B သည် အတွေ့အကြုံ အနှစ် 40 ခန့်ရှိသော အသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများမှ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုဗျူဟာအချို့ကို တွေ့ရှိခဲ့သည့် သုံးစွဲသူတစ်ဦးစီအတွက် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးနောက် အပြည့်အဝဆိုက်အသစ်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
reviews - အေဂျင်စီများသည် ဝန်ဆောင်မှုပြင်ပအကြောင်းအရာအနည်းငယ်နှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုတွင် စာကြောင်းအနည်းငယ်ပါရှိသော တစ်ခုတည်းသောသုံးသပ်ချက်တစ်ခုစီဖြင့် ရာနှင့်ချီသောစာမျက်နှာများကို အေဂျင်စီများမှထုတ်ဝေသည်။ ဤနေရာတွင် ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ပထဝီဝင်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် သော့ချက်စာလုံးများကို အရင်းအနှီးပြုရန် ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။
ဒေသဆိုင်ရာစာမျက်နှာများ - အေဂျင်စီများသည် ပေးအပ်ထားသော အိမ်ဝန်ဆောင်မှု၏ အကြောင်းအရာကို ထပ်ခါတလဲလဲ ဖော်ပြထားသော်လည်း ခေါင်းစဉ်နှင့် စာကိုယ်တွင် မတူညီသော မြို့ သို့မဟုတ် ခရိုင်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် ဌာနတွင်းစာမျက်နှာ ဒါဇင်များစွာကို ထုတ်ဝေသည်။ ဤနေရာတွင် ပန်းတိုင်သည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်… ပထဝီဝင်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် သော့ချက်စကားလုံးများကို အရင်းပြုရန် ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။
ဒါက နည်းဗျူဟာတစ်ခုလို့ ကျွန်တော် မပြောပါဘူး။ မတတ်နိုင် အသုံးပြုရမည်၊ ၎င်းသည် ဒေသနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ပစ်မှတ်ထားသည့် အကြောင်းအရာ၏ ထင်ရှားပြီး မိုက်မဲသော အကောင်အထည်ဖော်မှုတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဤနည်းဗျူဟာကို လုံးဝမနှစ်သက်ပါ၊၊ အောက်ခြေရှိ ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာများကို ဖုန်းနံပါတ် (ဒေသန္တရနယ်မြေနှင့်အတူ) အပါအဝင် အောက်ခြေရှိ လုပ်ငန်းတည်နေရာ(များ) ၏လိပ်စာအပါအဝင် အောက်ခြေရှိ ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာများကို သတ်မှတ်ရာတွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် အောင်မြင်မှုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ကုဒ်)၊ ထို့နောက် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် စာမျက်နှာ၏ကိုယ်ထည်တွင် ခိုင်မာသောအချက်အလက်များကို ထုတ်ဝေခြင်း။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကန်ထရိုက်တာအလုပ်လုပ်သောဒေသအားလုံးတွင် "ခေါင်မိုးကန်ထရိုက်တာ" အတွက် အမိုးမိုးစာမျက်နှာကို ကောင်းစွာအဆင့်မသတ်မှတ်နိုင်ရသည့်အကြောင်းရင်း လုံးဝမရှိပါ။ လိုအပ်သည်ထက် အမိုးမိုးထားသောစာမျက်နှာတစ်ခုတည်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်လိုပါသည်။ client တစ်ခုအတွက် စာမျက်နှာများစွာကို ဖန်တီးပြီး ခြေရာခံပါ။
အဆိုးဆုံးမှာ၊ ဤဖောက်သည် နှစ်ဦးစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ ဆိုက်မှတစ်ဆင့် အမှန်တကယ် ဦးဆောင်မှု မရရှိခဲ့ဘဲ ၎င်းတို့၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် တစ်နှစ်ကျော်အတွင်း အပြောင်းအလဲမရှိခဲ့ပေ။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများသည် ဆိုက်(များ) နှင့် အေဂျင်စီတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ domain re ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။gistration ဒီတော့… သူတို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ ငွေတွေအားလုံးက သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကို အမှန်တကယ် ကြီးထွားလာဖို့ နီးစပ်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗျူဟာသစ်တစ်ခု ဖြန့်ကျက်ဖို့ ကျွန်တော့်ကုမ္ပဏီကို ပစ်မှတ်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
ဖောက်သည်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ ဒေသတွင်းရှာဖွေမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ အသစ်စက်စက် ဆိုဒ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဒရုန်းနှင့် စတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအစား ၎င်းတို့၏ လက်တွေ့အလုပ်၏ ရှေ့/နောက် ဓါတ်ပုံများကို ရိုက်ယူခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကမ်ပိန်းများကို စတင်ရိုက်ကူးခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ပြိုင်ဘက်များနှင့် ကွဲပြားစေခြင်း၊ သင့်လျော်သော စာမျက်နှာများဆီသို့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အတွင်းပိုင်းလင့်ခ်များကို မှန်ကန်စွာ ပြန်ညွှန်းပေးခြင်းဖြင့် မြင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း၊ YouTube၊ လူမှုရေး၊ လမ်းညွှန်များနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ကန်ထရိုက်တာလမ်းညွှန်များပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏ လက်လှမ်းမီမှုကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်နေသည်။
Backlink Audit ကို ဘယ်အချိန်မှာ လုပ်ရမလဲ
နောက်တစ်ခုက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာက ပြောပြတယ်။
ဖောက်သည် A - ကျွန်ုပ်တို့သည် အရှည်ကြာဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့သော၊ အမှတ်တံဆိပ်ပါသောသော့ချက်စာလုံးများအပြင် ၎င်းတို့၏ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို မြင်နိုင်စွမ်းကို မတိုးတက်ခဲ့ပါ။ YouTube မှ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ထားသော စာမျက်နှာများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လမ်းညွှန် 70 ကျော်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့သည်... နှင့် မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမျှသာ ရှိသေးသည်။ Key က မြင်နေရတယ်။ အမှတ်တံဆိပ်မပါသောသော့ချက်စာလုံးများ ဘယ်တော့မှ မရွေ့ဘူး… စာမျက်နှာ5သို့မဟုတ် ဒီထက်ပိုနက်နဲတဲ့ နေရာမှာ မြှုပ်နှံထားသမျှ။
လိုင်းခ - ၎င်းတို့၏ဆိုက်ကို ထုတ်ဝေပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ၎င်းတို့သည် ဦးဆောင်မှုကောင်းများရရှိကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏အဆင့်များ တက်လာခဲ့သည်။ အမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သော သော့ချက်စာလုံးများ။
၎င်းတို့၏ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို သုတေသနပြုပြီး ၎င်းတို့၏ စာမျက်နှာများကို ရက်သတ္တပတ်များစွာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ရပါသည်။ ဖောက်သည် A မရွေ့။ မေးခွန်းထုတ်စရာဗျူဟာများကို အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့၏ဆိုက်ရှိ backlinks များ၏ အရည်အသွေးကို ကြည့်ရှုလိုပါသည်။ လုပ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ backlink စာရင်းစစ်!
Backlink စစ်ဆေးမှုသည် ၎င်းတို့၏ဆိုက် သို့မဟုတ် အတွင်းစာမျက်နှာများသို့ လင့်ခ်များအားလုံးကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး backlink တည်ရှိသည့်ဆိုဒ်များ၏ အရည်အသွေးကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Backlink စစ်ဆေးမှုများသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ SEO ဆိုသည်မှာ tool ကို… ငါသုံးတယ်။ Semrush. ဤစစ်ဆေးမှုများမှတစ်ဆင့်၊ သင်သည် အရည်အသွေးမြင့် ဆိုက်များမှ လင့်ခ်များအပြင် Google ကို ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် အကြောင်းကြားသင့်သည့် မကောင်းတဲ့ နောက်ကြောင်းပြန်လင့်ခ်များ (အဆိပ်ဟုလည်း ခေါ်သည်) တို့ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။
Bad Backlinks ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဤသည်မှာ backlinks ၏ကောင်းမွန်သောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆိုးရွားသောလင့်ခ်များသည် ၎င်းတို့ကို blackhat SEO အသုံးပြုသူများအသုံးပြုပုံအပြင် ၎င်းတို့သည် Google ၏စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။
Backlink စစ်ဆေးမှုများနှင့် Backlinks များကို ငြင်းပယ်ခြင်း။
အသုံးပြုခြင်း Semrush၏ backlink စစ်ဆေးမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့၏ဆိုက်ကိုရည်ညွှန်းသော ဒိုမိန်းများနှင့် စာမျက်နှာများကို ရှင်းလင်းစွာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-
Semrush Backlink စာရင်းစစ်
ထိုကဲ့သို့သော ကိရိယာများကို မှတ်သားထားပါ။ Semrush အံ့သြစရာကောင်းပေမယ့် သုံးစွဲသူတိုင်းအတွက် အခြေအနေတိုင်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလို့မရပါဘူး။ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်နှင့် နိုင်ငံတကာ သို့မဟုတ် ဘာသာစကားမျိုးစုံဝန်ဆောင်မှုအွန်လိုင်းကြားတွင် စာရင်းအင်းအရ ကြီးမားသောကွာခြားချက်ရှိပါသည်။ ဤကိရိယာများသည် ပြင်းထန်သော ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သော နှစ်ခုလုံးကို ညီတူညီမျှ ဆက်ဆံတတ်သည်။ ဤအမှုသည် ဤကိစ္စတွင်-
စုစုပေါင်းနည်း - ဒီအစီရင်ခံစာက ပြောနေချိန်မှာ၊ စုံလင်သော, ကျွန်တော်သဘောမတူပါ။ ဤဒိုမိန်းတွင် စုစုပေါင်း backlink အရေအတွက်နည်းသောကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ယူဆချက်အရ အမှန်တကယ်အဆိပ်သင့်သော backlink တစ်ခုရှိခြင်းသည် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရည်အသွေး - တစ်ခုတည်းသောလင့်ခ်အဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားထားသော်လည်း၊ အဆိပ်သင့်အခြားလင့်ခ်များစွာကို ငါတွေ့ခဲ့သည်။ မယုံသင်္ကာရှိ စာရင်းစစ်အတွင်း၌သော်လည်းကောင်း အဆိပ်သင့်မှုအဆင့်အောက် တွင် အမှတ်အသားပြုထားသည်။ လုံခွုံသော. ၎င်းတို့သည် အဓိပ္ပါယ်မရှိသော ဒိုမိန်းများတွင် ဖတ်ရှု၍မရသော စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ရှိနေကြပြီး ၎င်းသည် ဆိုက်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း လမ်းကြောင်းကို သယ်ဆောင်လာခြင်းမရှိပေ။
Google သည် ဤမကောင်းတဲ့ လင့်ခ်များ အပြင်ထွက်သည့်အခါ ၎င်းတို့အား အသိပေးရန် နည်းလမ်းတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးထားပြီး၊ လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် လူသိများသည်။ ငြင်းသည်။. သင့်ဆိုဒ်ကို အဆင့်သတ်မှတ်သင့်သည်များကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် Google ၏ အညွှန်းမှ ငြင်းပယ်လိုသော ရိုးရှင်းသော စာသားဖိုင်ကို အပ်လုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ငြင်းပါ။ - SEO ပညာရှင်များသည် ဒိုမိန်းများနှင့် စာမျက်နှာများစွာကို Google သို့ လွတ်လပ်စွာ သတင်းပို့ရန် disavow tools များကို အသုံးပြုသည့် ဆောင်းပါးများစွာကို အွန်လိုင်းတွင် ဖတ်ဖူးပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ချဉ်းကပ်မှုတွင် အနည်းငယ် ရှေးရိုးဆန်သည်… ဆိုက်၏ အရည်အသွေး၊ ၎င်း၏ ရည်ညွှန်းလမ်းကြောင်း၊ ၎င်း၏ အလုံးစုံ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း စသည်တို့အတွက် လင့်ခ်တစ်ခုစီကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်သော နောက်ခံလင့်ခ်များကို တစ်ယောက်တည်း ချန်ထားခဲ့ကာ မေးခွန်းထုတ်စရာနှင့် အဆိပ်ရှိသော လင့်ခ်များကိုသာ ငြင်းပယ်ကြောင်း သေချာပါသည်။ စာမျက်နှာထက် ဒိုမိန်းတစ်ခုလုံးကို ငြင်းပယ်ခြင်း၏ ဘေးတွင် ကျွန်ုပ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။
Google ၏ disavow tool ကိုအသုံးပြုမည့်အစား၊ လင့်ခ်ကိုဖယ်ရှားရန် ရည်ညွှန်းသောဆိုက်ပိုင်ရှင်ကို ဆက်သွယ်ရန်လည်းကြိုးစားနိုင်ပါသည်... သို့သော် ဤ spammy, အဆိပ်သင့်သောဆိုက်များတွင်၊ တုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များ လုံးဝမရှိခြင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်မကြာခဏတွေ့ရှိပါသည်။
Semrush Disavow ကိရိယာများ
Semrush မှတဆင့် ရရှိနိုင်သော ကိရိယာများသည် သင့်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် သင့်ဖောက်သည်များကို ထိန်းသိမ်းရန် အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်စွာ တွေးခေါ်နိုင်သည် ။ backlink ပရိုဖိုင်များ. tool မှပေးသောအင်္ဂါရပ်အချို့:
ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈ - အထက်တွင်တွေ့မြင်ရသောအစီရင်ခံချက်။
ငှေစာရငျးစစျဆေး - သင့်ဆိုက်အတွက် တွေ့ရှိရသည့် backlink တိုင်း၏ ပြည့်စုံသောစာရင်းတစ်ခု၊ ၎င်း၏ အဆိပ်သင့်မှု၊ ဦးတည်ရာစာမျက်နှာ၊ ကျောက်ဆူးစာသား၊ ၎င်းကို အဖြူအမည်းစာရင်းသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဒိုမိန်း သို့မဟုတ် စာမျက်နှာကို disavow စာသားဖိုင်တစ်ခုသို့ ထည့်ခြင်းကဲ့သို့ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ။
ငြင်းပါ။ - သင့်လက်ရှိ disavow ဖိုင်ကို ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုအတွက် အပ်လုဒ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် Google Search Console တွင် အပ်လုဒ်လုပ်ရန်အတွက် disavow ဖိုင်အသစ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည်။
ခြေရာကောက် – Google Search Console နှင့် Google Analytics တို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၊ သင်၏ မကျေနပ်ချက်ကို ယခု သင့်အတွင်း ခြေရာခံနိုင်ပါပြီ။ Semrush သက်ရောက်မှုကို မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ စီမံကိန်း။
ဒါကတော့ screenshot တစ်ခုပါ။ backlink စာရင်းစစ် … ငါအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူကို အပြိုင်အဆိုင်မတွေ့ချင်တာကြောင့် ဒိုမိန်း၊ ပစ်မှတ်နဲ့ ကျောက်ဆူးစာသားတွေကနေ သုံးစွဲသူအချက်အလက်ကို ဖယ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။
သင့်အတွက် Semrush တည်ဆောက်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားသည့် disavow စာသားဖိုင်သည် ပြီးပြည့်စုံသည်၊ ရက်စွဲဖြင့် အမည်ပေးထားပြီး ဖိုင်တွင် မှတ်ချက်များ ထည့်သွင်းထားသည်-
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ ဖိုင်ကို အပ်လုဒ်လုပ်ပါ။ search console တွင် Google ၏ Disavow Tool ကို ရှာမတွေ့ပါက၊ သင်သည် သင်၏ Disavow စာသားဖိုင်ကို အပ်လုဒ်လုပ်နိုင်သည့် လင့်ခ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Google Search Console Disavow လင့်ခ်များ
2-3 ပတ်စောင့်ပြီးနောက်၊ အမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သောသော့ချက်စာလုံးများဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုကို ယခုတွေ့မြင်နေရပါသည်။ Disavow သည် အလုပ်လုပ်နေပြီး ယခုအခါ client သည် ၎င်းတို့၏ အမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သော ရှာဖွေမှုကို မြင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြင့်နိုင်နေပြီဖြစ်သည်။
Backlinks အတွက် ဘယ်တော့မှ ငွေမပေးပါ။
ကျွန်ုပ်၏ ခန့်မှန်းချက်မှာ ဖောက်သည်၏ဆိုက်ကို စီမံခန့်ခွဲသည့် နောက်ဆုံးကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏ အလုံးစုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးစားရန် အခပေး backlinking အချို့ကို လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ အန္တရာယ်များသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်… ၎င်းသည် သင့်ဖောက်သည်မှ အလုပ်ထုတ်ခံရပြီး ၎င်းတို့၏ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ မြင်နိုင်စွမ်းကို ဖျက်ဆီးရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အေဂျင်စီက ဒီလိုအလုပ်မျိုးမလုပ်ဖူးရင် ထုတ်ဖော်ဖို့ အမြဲတောင်းဆိုတယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်များက SEO ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် backlink စာရင်းစစ်ကို ကျွန်တော်တကယ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ လင့်ခ်များကို အလွယ်တကူ ခြေရာခံနိုင်ခဲ့သည်။ link စိုက်ခင်းများ သူတို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေရဲ့ မြင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ဖို့ သူတို့ တည်ဆောက်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်သည် စာချုပ်ကို ချက်ချင်းပယ်ချပြီးနောက် လင့်ခ်များကို ဖယ်ရှားရန် ကျွန်ုပ်အား လုပ်ဆောင်ခိုင်းသည်။ ပြိုင်ဘက်များ၊ မီဒီယာများ သို့မဟုတ် Google သည် ထိုလင့်ခ်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါက ဤဖောက်သည်၏လုပ်ငန်းကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်... စာသားအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်အား ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း ... အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းတို့၏ SEO ကုမ္ပဏီသို့ လင့်ခ်များကို ခြေရာခံနိုင်ပါက၊ Semrush. Google မှာ PhDs တည်ဆောက်မှု algorithms ထောင်ပေါင်းများစွာလည်း လုပ်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်သေချာပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ကာလတိုအတွင်း အဆင့်တိုးမြှင့်နိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့သည် Google ၏ ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံကာ ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။ စာရင်းစစ်လုပ်ရန် အပိုကုန်ကျစရိတ်ကို မပြောလိုပါ။ backlink မှုခင်းဆေးပညာထို့နောက် ၎င်းတို့ကို နှိမ်နှင်းရန် ငြင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Backlinks ရယူရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဝင်ငွေ. မီဒီယာအားလုံးတွင် ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာကို ဖန်တီးပါ၊ ချန်နယ်အားလုံးတွင် ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများကို မျှဝေပြီး မြှင့်တင်ပါ၊ မယုံနိုင်လောက်အောင် backlinks အချို့ကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်သော်လည်း သင်လုပ်နေသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အန္တရာယ်မရှိပါ။
Semrush အတွက် စာရင်းသွင်းပါ။
အကယ်၍ သင်သည် အဆင့်သတ်မှတ်ရန် ခက်ခဲပြီး အကူအညီအချို့ လိုအပ်ပါက၊ သုံးစွဲသူများစွာကို ၎င်းတို့၏ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပေးပါသည်။ ငါတို့အကြောင်းမေးပါ။ SEO အတိုင်ပင်ခံ ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှာ။
ထုတ်ဖော်ချက်- ကျွန်ုပ်သည် ပါဝါအသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဂုဏ်ယူသောတွဲဖက်ဖြစ်သည်။ Semrush ကျွန်ုပ်သည် ဤဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံး ကျွန်ုပ်၏ တွဲဖက်လင့်ခ်များကို အသုံးပြုနေပါသည်။
Tags: backlink စာရင်းစစ်backlink မှုခင်းဆေးပညာbacklink ပရိုဖိုင်နောက်ကြောင်းပြန်website ရဲ့ backlinkမကောင်းတဲ့ backlinksမကောင်းတဲ့လင့်များငြင်းသည်။google search consolebacklink စာရင်းစစ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နောက်ခံလင့်ခ်များကို သုတေသနပြုနည်းdetox link ပါlink မှုခင်းဆေးပညာlink ကိုရှာဖွေရေးကိရိယာများပေးဆောင် backlinksရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationsemrushSemrush backlink ကိရိယာများseoအဆိပ်မဖြစ်ဘူးလား
မတ်လ 5, 2013 မှာ 1: 46 pm တွင်
ဒီည ငါဒီလိုလုပ်နေတာ မင်းသိသလိုပဲ။ နောက်ခံလင့်ခ်များအားလုံးကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့သော်လည်း 301 URL များကို ပြောင်းလဲခြင်းမပြုဘဲ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏ ပင်မစာမျက်နှာသို့ - ဧရာမ PITA။ လနဲ့ချီကြာပေမယ့် အဲဒါကြောင့် မီးခိုးရောင်ဦးထုပ်ကို ကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ 6, 2013 မှာ 11: 31 AM
လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ ချစ်သူ။ LinkResearchTools သို့ဝင်ရောက်ပြီး ကျန်အရာများကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးပါမည်။ Manual နည်းလမ်းများဖြင့် Penguin ကို ရှောင်နည်း နှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရပါသည်။ http://www.technologyace.com/internet-marketing/seo/recover-blogwebsite-google-latest-penguin-2-0-update/
27:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 6, 42
Link Research နှင့် Link Detox ကိုသုံးသောအခါ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ရလဒ်အတွက် အလွန်စိတ်ပျက်မိပါသည်။ အများကြီးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး၊ လိုအပ်တဲ့အခါ အကူအညီအများကြီးမပေးပါဘူး။ ဖိုရမ်အမျိုးမျိုးတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော သုံးသပ်ချက်များကို တွေ့ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်၏ backlinks များကို ခွဲထုတ်ရန် The Link Auditors ကို အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ၎င်းတို့တွင် သင့်အား မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် အကြံဉာဏ်များပေးရန် အမြဲတမ်း လက်ထဲတွင် ရှိနေပါသည်။ Link Auditors ၏ ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ အဆိပ်သင့်သော လင့်ခ်များအားလုံးကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးကို အပြည့်အဝ ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောခဲ့တဲ့ အဖွဲ့သား Jason က ဖုန်းပံ့ပိုးမှုမှာ အလွန်အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူသည် ကျွန်ုပ်၏ ပြဿနာများကို နားထောင်ပြီး အမှားကို အတိအကျ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါကိုလုပ်ပြီးတာနဲ့ ဘယ်ကိရိယာတွေက ငါ့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ ပြောပြတယ်။
The Link Auditors ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ အလွန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရခဲ့ပြီး မည်သည့်လင့်ခ်များကို ထိခိုက်နစ်နာစေသည်ကို အတိအကျသိမြင်နိုင်ပြီး မည်သည့်လင့်ခ်များကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်သည်ကို သိရှိပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဖယ်ရှားရေးကိရိယာကို အသုံးပြုခြင်းသည် အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီး အလွန်မြန်ဆန်သောကြောင့် အသုံးပြုခြင်းသည် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ အင်တာနက်မှာရနိုင်တဲ့ ဖယ်ရှားရေးကိရိယာအမျိုးမျိုးကို ကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ အဲဒါတွေက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
28:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 4, 31
ကျွန်တော်လည်း The Link Auditors ကိုသုံးပါတယ်။ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်၏စာရင်းစစ်တွင် ကျွန်ုပ်အား များစွာကူညီခဲ့ပြီး လိုအပ်သောအခါတွင် ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် ကျွန်ုပ်၏ပြဿနာများကိုလည်း ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ ဒီပို့စ်ကို လူများများသိသင့်တယ်ထင်လို့ အခုလို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုက အရမ်းကောင်းတာမို့ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူပါတယ်။